အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): “အရမ်းကာင်းတာပဲသားသားရယ်
အဖြူရောင်ဆိုတာစွန်းထင်းသွားခဲ့ရင် ဖျက်ပြစ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့ နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားတွေကိုအရင်းတည်ပြီး သေသပ်လှပတဲ့ဆေးရောင်တွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ချယ်မှုန်းလိုက်တဲ့အခါနဂိုရှိရင်းစွဲအဖြူရောင်လေးရဲ့တန်ဖိုးဟာလဲ မြင့်မားလာတယ်လေ…………………………………………………
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေအတူနေသွားကြရင့်…….တစ်နေ့ပေါ့……….
ဖေဖေမေမေ ကအတူမရှိတော့ ဖေဖေစက်ရုံကိုမနက်ဆိုကျွန်တော်သွားရတယ် အဲ့ဒီနေ့ကနေ့လည်တစ်နာရီလောက်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်
၊အိမ်မှာ မမလဲမရှိ၊ တံခါးရောကုလားကာရောပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့လူမရှိဘူးထင်လိုက်မိတာ. ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ညီမလေးဖိနပ်နဲ့ ယောင်္ကျားလေးဖိနပ်တရံကိုတွေလိုက်ရတယ်။ စစချင်းတော့ရင်ထဲမှာထိတ်သွားမိတာပေ့ါ ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲငယ်ရာကကြီးလာတာပဲလေ။ အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော် ဖိနပ်ကိုအသာလေးယူပြီးကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာတိတ်တိတ်လေးဝင်နေလိုက်တယ်။
စိတ်ထဲမှာတော့ မတော်တရော်ကောင်လေးတွေနဲ့ ညီမလေးဖြစ်နေမှာစိုးရိမ်နေမိတုံးပါပဲ။
ကျွန်တော်ကအိမ်မှာကျွန်တော့်အခန်းကိုအမြဲသော့ခတ်ထားနေကျဆိုတော့ ညီမလေးလဲမရိပ်မိလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အခန်းဘေးမှာညီမလေးနဲ့ မမအိပ်ခန်းလေ။ အခန်းအပေါ်ဖက်မှာ Air Con တစ်လုံးနဲ့အေးအောင်သစ်သားချောင်းလေးတွေကာထားတော့ ကုတင်ပေါ်ကတက်ကြည့်ရင်အားလုံးကိုမြင်နေရတယ်။
ပြီးတော့ အခန်းတံခါးပိတ်သံနဲ့အတူ အခန်းမီးလေးလဲပိတ်ပြီး ညအိပ်မီးရောင်လေးလင်းလာတယ်။
နမ်းနေရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်အတူမတ်တပ်ရပ်ရင်း ညီမလေးရဲ့တီရှပ်အဖြူရောင်လေးကိုချွတ်လိုက်တော့ ဖွေးနေတဲ့ နို့နှစ်ရောင်အသားစိုင်တွေပေါ်က အနက်ရောင်ဘော်လီတင်းတင်းလေးနဲ့ ဘော်လီလေးအတွင်းကနေမို့ဖောင်းနေတဲ့ ရင်းသားပြည့်ပြည့်လေးတွေကတင်းရင်းအိစက်လို့ …………………..
“ချစ်လေးရယ် မကြာခင်ကိုတို့ခွဲရတော့မှာလေ ။ ကိုဖြေးဖြေးလေးချစ်လေးမနာအောင်လုပ်ပါ့မယ်နော်”
“အင်းပါ” ဆိုတဲ့စကားသံတိုးတိုးလေးနဲ့အတူ နှစ်ယောက်လုံးကုတင်ပေါ်ကိုပွေ့ဖက်လဲကျသွားတယ်။
ဖြူဝင်းနေတဲ့ နို့အုံတင်းတင်းလေးတွေက အထိမ်းအကွတ်မဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းလေး အိဆင်းသွားတယ်။
ဖြူဖွေးနေတဲ့ နို့အုံလေးပေါ်နှာ ပန်းရောင်ခပ်ပြေပြေနို့သီးလေးတစ်စုံက ချစ်သူကောင်လေးရဲ့နှတ်ခမ်းတစ်စုံကိုကြိုလင့်နေသလိုလို………..။
ညီမလေးဆိုတဲ့အသိတွေတခဏ ဆိတ်သုန်းသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စိတ်အစဉ်ကလဲ လှပပြည့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလှလှလေးကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ညီမလေးရဲ့ နို့လေးတွေကိုဖွဖွလေးပွတ်နယ်နေရင်းနဲ့ တင်းနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုမထင်မှတ်ပဲစုပ်ယူလိုက်တဲ့ခဏ…………..
ညီမလေးရဲ့လက်တွေက အိပ်ယာခင်းလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်လို့ ပြည့်တင်းနေတဲ့ရင်းသားတွေကိုကော့ကော့ပေးနေတယ်။
နို့တွေကိုစို့ပေးနေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက တစ်ဖြေးဖြေးအောက်ကိုလျောဆင်းရင်းနဲ့ ညီမလေးရဲ့ စကတ်ဇစ်လေးကိုဖြုတ်လိုက်တော့ ဟသွားတဲ့စကတ်လေးအောက်မှာ ဖောင်းမို့နေတဲ့ဆီးခုန်းလေးပေါ်လာတယ်
ဖွေးနုနေတဲ့ ပေါင်သားပြည့်ပြည့်လေးတွေရဲ့အဆုံးမှာ အနက်ရောင်ပိုးသားဘောင်းဘီလေးက ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် တိတိပပ နဲ့အသားစိုင်လေးပေါ်မှာကပ်လို့ညီမလေးရဲ့ဖောင်းမို့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်။
ဖောင်းမို့နိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ဆီးခုန်လေးအဆုံးမှာပြည့်ပြည့်လေးနဲ့မို့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်သားလေးတွေက ဘောင်းဘီလေးထဲကနေရုန်းကြွလို့ လှပနေတယ်။
ညီမလေးရဲ့လက်တွေက ကောင်လေးရဲ့ဆံပင်တွေကိုထိုးဖွလို့ ဖင်လေးကိုကော့ရင်းနဲ့တိုးတိုးလေးညီနေလေရဲ့.။
ဆီးခုံဖောင်းဖောင်းလေးတစ်လျောက်လျှောဆင်းသွားတဲ့အဆုံးမှာ မို့မို့လေးဖောင်းနေတဲ့စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတစ်စုံကတင်းတင်းလေးစိလို့ ပန်းရောင်ကကွဲကြောင်းလေးတစ်လျောက်ချစ်သူရဲ့လျှာဖျားလေးတိုးဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ…………
ပါးစပ်နဲ့အားရအောင်စုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ညီမလေးတစ်ယောက် ချစ်သူကိုကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲရင်းချစ်သူရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ပေးနေတယ်။
စိုအိနုထွေးနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးနဲ့ လီးခေါင်းလေးကိုစုပ်ယူနေတယ်။ လီးခေါင်းလေးရဲ့အဆုံး ဒစ်ကြားလေးထဲကိုလျက်နေတဲ့
ညီမလေးရဲ့လျှာနီနီလေးတစ်လျောက်မှာလဲ အချစ်ရည်တွေတွဲခိုကပ်ညိလို့…ပါးလေးချိုင့်သွားတဲ့အထိ စုပ်ယူနေတဲ့ ပါးလေးပေါ်မှာလဲ သွေးကြောနီနီလေးတွေကအလှဆုံးနတ်သမီးလေးတစ်ပါးရဲ့ခြုံလွှာတစ်ထည်လို နီထွေးနေတယ်။
အချစ်ရည်တွေနဲ့ စိုအိနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဝလေးတစ်လျောက် လီးဒစ်လေးမြုတ်သွားတော့ ညီမလေးရဲ့ဂျိုင်းကြားအောင်ကနေပုခုံးတွေကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း
“sorry နော် ကိုကြောင့်ချစ်လေးအောင့်သွားတာ”
“ရပါတယ်”………………………………. “ကို့ ကိုအရမ်းချစ်တယ်”
လှဲနေရင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ရင်း ညီမလေးရဲ့နို့ဖြူဖြူလေးတွေကိုစို့လို့ ညီမလေးလဲ ချစ်သူပေါင်ပေါ်မှာရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကော့ရင်းလိုးနေတယ်။
စည်းချက်ညီညီခါရမ်းနေတဲ့နို့ဖောင်းဖောင်းလေးတွေက ညအိပ်မီးမှောင်မှောင်လေးအောက်မှာ အချိုးကျလှပနေတဲ့ပန်းပုရုပ်ထုလေးအလား ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ လောကနိဗာန်ကိုနှစ်ယောက်အတူခံစားနေကြတယ်။
ညီမလေးရဲ့စကားသံအဆုံးမှာ ကုတင်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့ ညီမလေးပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်နေတဲ့
“အား……အာ……အာ……. ကိုချစ်လေးပြီးပြီ” ……………….အား……………………
ဆွဲဆွဲငင်ငင် အော်ညီသံအဆုံးမှာ ညီမလေးနဲ့သူချစ်သူနှစ်ယောက်လုံး တင်းတင်းလေးဖက်လို့ အနမ်းတွေပေးရင်းငြိမ်သက်သွားတယ်။
နှစ်ယောက်အတူဖက်ရင်း ပြုံးနေတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကိုတွေ့နေရပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာပေ့ါ ပူလောင်ခြောက်သွေ့လို့……………………………
“ကို ရေသွားချိုးရအောင်လေ တော်ကြာမမပြန်လာတော့မယ်ထင်တယ် တီလေးနဲ့နှစ်ယောက်အပြင်သွားတာ”
တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ အိမ်ထဲမှာတစ်ယောက်ထဲကျန်နေခဲ့တယ်။ ညီမလေးလဲသူ့ချစ်သူနဲ့ အပြင်ထွက်သွားပြီလေ။ မျက်လုံးတွေမှိတ်လိုက်တိုင်း ကုတင်ပေါ်မှာရမက်သွေးတွေနဲ့နေတဲ့လှပနေတဲ့ညီမလေးရဲ့ အလှတရားကိုပဲပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်………………..။ ဒီလိုနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားမိလဲတောင်မသိတော့ပါဘူး။နိုးလာတဲ့အချိန်မှာအခန်းအပြင်က မမ နဲ့ တီတီလေးအသံကိုကြားရတယ်။ ကျွန်တော်အခန်းအပြင်ထွက်သွားတော့ မမက……….
“ဟုတ်နဲ့နဲ့တော့ကြာပြီ မမ….. အရမ်းအိပ်ချင်လို့အိပ်ပျော်သွားတာ”
“အင်း အင်း ဒါဆိုလန်းသွားအောင်ရေချိုးလိုက်တော့”
“သားအန်ကယ်လဲ နောက်တစ်ပတ်ကိုခရီးသွားရမယ်ဆိုလို့ လေ သူ့အတွက်လိုတာတွေကောပေါ့”
“အော် ဟုတ…………်ဒါဆိုသားရေသွားချိုးတော့မယ်နော် တီလေး”
အတွင်းခံဘောင်းဘီတော့မချွတ်ခဲ့ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စောစောကအရှိန်လေးနဲ့ မမ နဲ့တီလေးကိုတွေလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာကျွန်တော်ရင်တွေပြန်ပူလာပြီး လီးကလဲအရမ်းကိုပြန်တောင်လာတယ်လေ။
အဲ့ဒီနေ့ကမမ၀တ်ထားတာအသားကပ်ဘောင်းဘီ အနက်ရောင်လေးနဲ့ တီရှပ်အနီရောင်လေးဗျ
ပြည့်တင်းနေတဲ့ မမပေါင်တံလေးတွေကိုအတိအကျ ဖေါ်ပြထားတဲ့ အသားကပ်ဘောင်းဘီလေးနဲ့ တင်ပါးတစ်ဝက်ကျော်ကျော်ပဲဖုံးပေးနိုင်တဲ့ တီရှပ်လေးရဲ့အောက်မှာ မမရဲ့ မို့တင်းနေတဲ့ ဖင်သားလုံးလုံးလေးကိုစီးနှောင်ထားတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကြိုးရာလေးကထင်းထင်းလေးပေါ်နေတယ်လေ။
တီတီလေးကိုကြည့်တော့လဲ ပိုလို့တောင်စိတ်လှုပ်ရှားမိသေးတယ်ဗျာ။ တီလေးကရှမ်းတရုတ်မလေးပေါ့၊ အသက်ကတော့ ၃၀ ကျော်လောက်ရှိပြီလေ။ မပိန်မ၀ပဲ့ ပြည့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်လေးပေါ့။ တီလေးက ထမိန်စကတ်ပဲအမြဲဝတ်တယ်လေ။ ခြေလှမ်းလိုက်ရင်ပေါင်တစ်ဝက်လောက်အထိမြင်ရတဲ့ စကတ်မျိုးပေါ့။
ဆိုဖာမှာထိုင်နေတဲ့ တီတီလေးက အကျီ ရယ်ဒီမိတ်အဖြူလေးနဲ့ စကတ်ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ပေါ့ ပြည့်ဖြိုးဆူတင်းနေတဲ့ ရင်သားလုံးလုံးလေးတွေကိုစီးနှောင်ထားတဲ့ ဘော်လီအနက်ရောင်လေးကလဲ အကျီအဖြူလေးအောက်ထင်းထင်းလေးပေါ်နေတယ်။ ဘော်လီအနက်လေးအပေါ်မှာ မို့မောက်လျှံတက်နေတက်တီလေးရဲ့ရင်သားနှစ်မွှာကလဲဖြူဝင်းအိစက်လို့…… ထိုင်နေတဲ့အချိန် မို့မောက်တက်နေတဲ့ ဆီးခုန်လေးနဲ့ ပေါင်သားပြည့်ပြည့်လေးတွေကလဲရင်ခုန်စရာအတိနဲ့လေ။
“ဟုတ်မမ …. မမကိုကျွန်တော်ပြောစရာရှိလို့”
“အင်းပြောလေ… နေအုံးမမ အ၀တ်လဲလိုက်အုံးမယ်နော်”
မမ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ကျွန်တော်လဲလိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကုတင်စောင်းနားလေးမှာထိုင်ရင်းစောစောကညီမလေးနဲ့သူချစ်သူနှစ်ယောက်အတူ လိုးနေကြတာကိုပဲမျက်စိထဲမှာပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်ဗျာ။
“အင်း မမ ဘယ်အချိန်ကအပြင်သွားတာလဲ”
“မနက်ထဲကပဲ လေ တီလေးခေါ်လို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ”
“ပြန်ရောက်တော့ မီးမီးနဲ့ သူကောင်လေးကအိမ်ထဲမှာ”
“ဟုတ်လား မနက်ကတော့ပြောတယ် သူချိန်းထားတယ်ဆိုတာကို”
“အော် ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဒီအခန်းထဲမှာ ဖြစ်ကြတယ်”
“အိုဘုရားရေ ….. တကယ်လား”
“အင်းဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တာကိုမသိကြဘူး …ကျွန်တော်လဲအခန်းထဲကိုဝင်နေတာ”
“အင်းသူလဲအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့…..ဒါပေမဲ့ မမစိုးရိမ်တာကတစ်ခုခုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်တာ..အိမ်မှာက မမ ကအကြီးလေ တစ်ခုခုဆို မမ တာဝန်ရှိတယ်လေ”
“အို ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ သားသားရယ်”
ပြောရင်းနဲ့မမနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းတော့ မမ တစ်ယောက်ကျွန်တော့်ကိုတင်းတင်းလေးဖက်လာတယ်
မမကိုနမ်းနေရင်းနဲ့မမဘော်လီလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ပြည့်တင်းနေတဲ့နို့အိအိလေးနှစ်လုံးကအတားအဆီးမဲ့အိကျလာတယ်။ မမနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေရင်းနဲ့ မမရဲ့နို့အိအိထွားထွားလေးကိုဆုပ်နယ်ပေးတဲ့အရသာကဘာနဲ့မှမတူဘူးဗျာ။
နို့တွေကိုအားရအောင်စို့ပြီးတော့မမပေါင်ကြားလေးထဲကနေထိုင်ပြီးမမ ရဲ့အသားကပ်ဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ ဖြူဝင်းအိစက်နေတဲ့ပေါင်သားအိအိလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အတွင်းခံဘောင်ဘီအနက်ရောင်လေးနဲ့ ….လှလိုက်တာဗျာ
မမရဲ့အလှကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ မမပေါင်လေးတွေကိုပွတ်ပေးတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မမရဲ့ အတွင်းခံလေးမှာ အချစ်ရည်လေးတွေရဲ့ နူးအိလာတယ်။
ပေါင်လေးတွေကိုပွတ်နေရင်းနဲ့ မမရဲ့အတွင်းခံလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ မို့တင်းနေတဲ့ဆီးခုန်လေးရဲ့အဆုံးမှာအမွေးရိတ်ထားတဲ့ပြောင်ချောနေတဲ့ မမရဲ့စောက်ဖုတ်နှစ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကတင်းတင်းလေးစိကပ်လို့…..
“အ…အ…အ….အ…အအအ ကောင်းလိုက်တာ သားသားရယ် မမအရမ်းကောင်းနေပြီ”
မမလဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းဆောင့်ပေးနေမိတယ်။ စောစောကညီမလေးတို့အတွဲကိုကြည့်တုံးကတက်နေတဲ့ feeling နဲ့ ကျွန်တော်လဲအရမ်းကိုကောင်းလာတယ်လေ
“အင်း ကောင်းတယ် သားသားရယ် မြန်မြန်ဆောင့်ပေးနော် မမပြီးချင်ပြီ”
“ဟုတ် သားသားလဲပြီးတော့မယ် မမ”
ကျွန်တော့ကိုဖက်ထားတဲ့ မမရဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့နှဖူးလေးကိုတုံးရင်း
ကျွန်တော်လဲမမရဲ့ ပန်းသွေးရောင်မျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေးကိုပြုံးကြည့်ရင်း သံယောဇဉ်တွေတိုးတိုးရစ်ပတ်လာခဲ့မိတယ်လေ………………………………..။
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းတစ်လျှောက် ကားလေးတစ်စီးတစ်ရိပ်ရိပ်ပြေးလို့….ကားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ရယ်၊ ကျွန်တော့်အန်ကယ်လေးရယ်၊ အန်ကယ်လေးမိန်းမ ကျွန်တော့တီတီလေးရယ် သုံးယောက်ပေါ့။
“သားသား အန်ကယ်လေးသွားရင်အိမ်မှာသွားအိပ်ပေးအုံးနော်၊မင်းတီတီလေးနဲ့ အိမ်ကကောင်မလေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲမို့လို့”
လေဆိပ်ကိုရောက်တော့ လေယာဉ်က check in ၀င်ဖို့ခေါ်နေပြီ။
“သွယ်သွယ်…ကိုသွားမယ်နော် .ဂရုစိုက်နော် . လိုတာရှိရင်သားသားကိုပြောနော်”
စကားဆုံးတော့ လေးလေးငယ် တစ်ယောက်လောလော.လောလောနဲ့ဝင်သွားလေရဲ့။
Check in ၀င်ပြီးအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့လေးလေးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ တီတီလေးနှစ်ယောက်ကားဆီကိုပြန်လာတဲ့အချိန် လေဆိပ်တံခါးကထွက်တော့ ရှေ့ကလျောက်သွားတဲ့တီတီလေးအလှကိုကျွန်တော်သတိထားမိသွားတယ်။
တီလေးကမေမေ့မောင်အငယ်ဆုံးရဲ့မိန်းမလေ။ အသက်ကတော့ ၃၄ လောက်ရှိပြီပေါ့။ ရှမ်းနဲ့တရုတ်စပ်တဲ့တီလေးကပြည့်ပြည့်တင်းတင်းလေးနဲ့ ချောတယ်ဆိုတာထက်ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ရယ်ဒီမိတ် အကျီခရမ်းရောင်လေးအောက်မှာ ဘော်လီအနက်လေးနဲ့ ထမိန်စကတ်အနက်ရောင်လေးကိုတင်းတင်းလေးဝတ်ထားတဲ့ တီတီလေးအလှကပြည့်ဖြိုးပေါ်လွင်လို့လေ။
ပြည့်ဖြိုးတဲ့ပေါင်တံတင်းတင်းလေးတွေကိုစီးနှောင်ထားတဲ့တီလေးရဲ့ထမိန်စကတ်တင်းတင်းလေးရဲ့ပေါ်မှာတင်သားပြည့်ပြည့်လေးတွေကို ဆွဲငင်မချီထားတဲ့ တီလေးရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကြိုးရာလေးကထင်းထင်းလေးပေါ်လို့ပေါ့။ကားနားကိုရောင်တော့ မထင်မှတ်ပဲပြုတ်ကျသွားတဲ့သော့ကိုကုန်းကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထမိန်စကတ်အနက်လေးရဲ့အထက်နားလေးက တီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပန်းနုရောင်လေးကိုတွေလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်အောင်လှုပ်ရှားသွားတယ်။
“အော် အင်းအင်း ဒါဆိုအိမ်ရောက်မှပဲစားတော့မယ်”
အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ကားကိုပါကင်ထိုးပြီးဓတ်လှေကားစောင့်ရင်းနောက်ကနေတီလေးရဲ့အလှကိုကြည့်နေမိတယ်။ တီလေးရဲ့အလှကိုသတိလက်လွတ်ငေးကြည့်နေရင်းအပေါ်ကိုမော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဓတ်လှေကားကတံခါးစတီးပြားကနေကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့ တီလေးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတဲ့ခဏ …
အိုး…..မျက်နှာပူလိုက်တာ ကိုယ်ကိုကိုယ်လဲရှက်သွားမိတယ်လေ ဒါကဦးလေးရဲ့မိန်းမဆိုတဲ့အသိနဲ့ကျွန်တော့ခေါင်းတွေပူထူသွားမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှတ်မထင်ပဲ တီလေးဆီကအပြုံးတစ်ပွင့်လင်းလက်လာတယ် …… ကျွန်တော်လဲမျက်နှာပူပူနဲ့ပဲပြန်ပြုံးပြမိလိုက်တယ်။ရင်ထဲမှာတော့အတွေးတွေယောက်ယက်ခတ်လို့ပေါ့။
ကျွန်တော့အခန်းကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာခဏထိုင်ရင်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေတုံး….
စကားသံနဲ့အတူ ကျွန်တော်ရှေ့ကနေဖြတ်သွားတဲ့ ညီမလေးရဲ့အနောက်ကိုအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိတောသေးသွယ်တဲ့ခါးသိမ်သိမ်လေးနဲ့တင်းရင်းပြည့်ဖြိုးတဲ့တင်သားလေးက ယဉ်ယဉ်လေးလှုပ်ရှားသွားတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ်
ရုတ်တရက်ဖုန်းသံကြားတော့မှ ဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့ကျွန်တော်လန့်နိုးလာမိတယ်။နာရီကိုကြည့်လိုက်နေ့လယ် ၁၁နာရီခွဲ။
ဖုန်းမှာ တီလေး ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုတွေ့လိုက်တော့ဘာရယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာနွေးကနဲ့ဖြစ်သွားမိတယ်။
“အော် ok သားသား တီလေးစောင့်နေမယ်”
ဖုန်းချပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲရေချိုး၊ ပုဆိုးနဲ့တီရှပ်တစ်ထည်ဝတ်ပြီး အောက်ထပ်ကတီလေးအခန်းကိုဆင်းသွားတော့……
တံခါးရှေ့ကလူခေါ်ဘဲလ် လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့တီလေး တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ်။ တီလေးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ် ရင်ခုန်ရပြန်ပါပြီ။ အိမ်နေရင်းဂါဝန် ပန်းရောင်လေးနဲ့ ဆံပင်တွေကိုစုစီးထားပြီး ပြင်ဆင်မှုကင်းတဲ့မျက်နှာပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ အရမ်းကိုနုနယ်လှပနေလိုက်တာ။
ထမင်းစားပွဲကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ငရံ့အူ နဲ့ ချည်ပေါင်ဟင်းအရည်သောက် ကတော်တော်ကိုခံတွင်းတွေ့သွားတယ်ဗျာ။
ထမင်းစားပြီးတော့အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်းရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုံးဘေးကနေတီလေးအလှကိုခိုးခိုးကြည့်နေမိတယ်။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ တီတီလေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲဆိုတဲ့အသိက တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာစေတယ်လေ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ…..
“အော် အင်းအင်း ဒါဆိုနားတော့လေ ဟင်းတွေရောသေချာအုပ်ထားလား”
စကားဆုံးတော့ ကောင်မလေးက သူအတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။
“အင်းဟုတ်တယ် တီလေး….ဖုန်းဆက်တော့ ဇူလိုင်လောက်ပြန်လာမယ်ပြောတယ်”
“အော် အင်းအင်း ဒါဆိုသားသားနဲ့မမ နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့မှာပေါ့”
“ဟုတ်တယ် မမလဲဟိုဖက်အိမ်မှာသွားလိုက်ဒီပြန်လိုက်လုပ်မယ်ထင်တယ် . ဟိုဖက်အိမ်မှာလဲပိတ်ထားရတော့ပျက်စီးတယ်လေ”
စကားတွေပြောပြီးတော့ နှစ်ယောက်လုံးတီဗီကဇတ်ကားကိုအာရုံရောက်သွားတယ်။ ခဏကြာတော့
ကျွန်တော်လဲပြောပြီးပြီးချင်းဧည့်ခန်းကနေ အနောက်ဖက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ တီတီလေးအခန်းရှေ့ကိုရောက်တော့အမှတ်မထင်တီလေးအခန်းထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။
အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမှထင်မထားတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ မနက်က သော့ကုန်းကောက်ရင်းတွေ့လိုက်ရတဲ့ တီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကအ၀တ်ခြင်းဘောင်လေးမှာတင်လို့……..
ကျွန်တော့်ရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ကိုခုန်သွားတယ် ဧည့်ခန်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတော့ အခန်းနဲ့ကွယ်နေတယ်လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီမှာပဲ ကျွန်တော်လက်တွေက အခန်းတံးခါးဘေးအ၀တ်ခြင်းပေါ်ကတီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုယူမိရက်သွာဖြစ်နေပြီ။
နောက်တော့စိတ်ထဲမှာမလုံတလုံနဲ့ပဲ toilet ထဲကိုမြန်မြန်သွားပြီးလော့ခ်ချထားလိုက်တယ်။
အထဲရောက်တော့ တီလေးရဲ့ဘောင်းဘီလေးကိုကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာအတွေးတွေယောက်ယက်ခတ်လို့……………..။
တီတီလေးရဲ့အတွင်းခံပန်းရောင်လေးကိုကိုင်ရင်းတစ်ယောက်ထဲဇောချွေတွေပြန်နေမိတယ်။ ပိုးသားအတွင်းခံလေးကတော့လက်ထဲမှာငြိမ်သက်နေတယ်။တီတီလေးရဲစောက်ဖုတ်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာလေးကိုကိုင်ကြည့်မိတော့ စိုအိအိအရသာလေးနဲ့အတူကျွန်တော်လီးကလဲအတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာထောင်မတ်လို့နေတယ်။
ဘောင်းဘီဂွကြားလေးကိုနမ်းကြည့်မိတော့ တီလေးရဲ့စောက်ဖုတ်နံ့သင်းသင်းလေးက သင်းပျံ့လို့…….
Toilet အပြင်ကိုရောက်တော့ တီတီလေးတစ်ယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော်လဲခါးပုံစထဲကဘောင်းဘီလေးကိုအသာထုတ်၊ အ၀တ်ခြင်းလေးပေါ်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့မှပဲ သက်ပျင်းချနိုင်တော့တယ်။
“သားသား ကြည့်ချင်ရင်ကြည့်နော် …တီလေးခဏလှဲလိုက်အုံးမယ်”
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တီတီလေးကိုအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲအနီးကပ်ကြည့်ခွင့်ရမဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လက်လွတ်ချင်ပါမလဲ။ ဒီလိုနဲ့အခန်းထဲရောက်တော့ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ပေါ်က အိစက်နေတဲ့မွေ့ယာထူထူ ပေါ်မှာတီလေးတစ်ယောက်လှဲအိပ်ရင်း ကျွန်တော်ကို ဘေးမှာလာလှဲဖို့ခေါ်တယ်လေ။
ကုတင်ရဲ့ဘေးမှာတော့ဘီဒိုတစ်လုံး၊ အဲ့ဒီရဲ့ဘေးမှာ တီတီလေးရဲ့ အလှပြင်တဲ့ မှန်တင်ခုံလေးရှိတယ်။ ဘီဒိုရဲ့ တစ်ခြားဘက်မှာတော့ စာရေးစာပွဲတစ်လုံး။ ကုတင်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့အ၀တ်လှမ်းစင်လေးတစ်ခု…………
အ၀တ်လှမ်းစင်ပေါ်ကိုအကြည့်ရောက်သွားတဲ့တစ်ခဏမှာကျွန်တော့အသက်ရှူသံတွေရပ်သွားရလောက်အောင်စိတ်တွေလှုပ်ရှားသွားမိတယ်ဗျာ။ စင်လေးပေါ်မှာ တီတီလေးရဲ့ ဘော်လီတွေနဲ့ အရောင်စုံလင်နေ့တဲ့ တီတီလေးရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတွေကိုလှမ်းထားတာတွေလိုက်ရတယ်။
“သားသား ရော ရည်းစားတွေဘာတွေရှိနေပြီလား”
“အင်း ဒါဆိုရင်တော့ ရှာပေးရတော့မယ်ထင်တယ်”
“အော်ကျွန်တော်လဲ တူလေးလိုချင်တာပေါ့တီလေးရဲ့”ဆိုတော့ အပြုံးလေးနဲ့
စိတ်ကွယ်ရာအခန်းလေးထဲမှာ ညအိပ်မီးဝါ၀ါလေးအောက်က စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်နဲ့တီလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားလာစေတယ်လေ။
“တီလေးရော လေးလေးနဲ့ အမြဲကြိုးစားလား သားသားတူလေးရဖို့ကို”
ကြားလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်လဲအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်လေ။ တီလေးလဲလူသားပဲဟာကို………..
ကျွန်တော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားလို့လက်တွေတောင်တုန်နေမိတယ်။ပြီးတော့ ပက်လက်လေးလှဲနေရာကနေ တီလေးဘက်ကိုစောင်းလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်နေတဲ့တီလေးနဲ့အရမ်းကိုနီးကပ်သွားတဲ့ခဏ
ပြီးတော့တီလေးစောင်းအိပ်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကိုနမ်းလိုက်မိတယ်။
တီတီလေးစကားမဆုံးခင်မှာပဲ တီလေးရဲ့နုထွေးနေတဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုကျွန်တော်နှတ်ခမ်းလေးနဲ့ထိကပ်လိုက်တော့ တီလေးဆီကအသက်ရှုသံတွေပြင်းလာတယ်လေ။ ကျွန်တော့်လျှာလေးကိုတီလေးပါးစပ်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တီလေးဆီကလျှာချင်းပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာတယ်။
ဝေခွဲမရတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တီလေးတစ်ယောက်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ပြီးတော့မှ ခေါင်းလေးကိုဖြေးဖြေးလေးညှိမ့်ရင်း
ပေါင်ရင်းနားလေးကိုရောက်လာတော့တီလေးရဲ့ ပိုးသွားအတွင်းခံချောချောလေးကဆီးကြိုလို့နေတယ်။ ကျွန်တော်လဲတီလေးပေါင်ကြားထဲမှာထိုင်ရင်းတီလေးရဲ့ပေါင်တစ်လျောက်ကိုဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေတော့ တီလေးတစ်ယောက်ပြည့်တင်းနေတဲ့တင်သားအိအိတွေကိုမြှောက်လို့တုံ့ပြန်နေတယ်။
တီလေးရဲ့ဆီးခုန်မို့မို့လေးတွေကိုလက်နဲ့ပွတ်သပ်ရင်း ခပ်ဟဟလေးကားနေတဲ့ပေါင်ကြားလေးကနေ တီလေးရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပေါ်ကနေလျှက်လိုက်တော့………..
အဲ့ဒီအချိန်မှာ တီတီသူငယ်ချင်းဆီကဖုန်းလာတယ်ဗျာ ည dinner မေ့မှာစိုးလို့တဲ့ အချိန်ကိုကြည့်တော့ ၄း၄၇ ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒါနဲ့ သားသား တီ ရေချိုးရတော့မယ်တဲ့သားသားလဲလိုက်ခဲ့တဲ့ညဆိုတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေမှာစိုးလို့တဲ့ဗျာ အခန်းမပြင်ထွက်တော့ကောင်မလေးကဟင်းတွေနွေးနေပြီးဗျ အပြင်ရောက်တော့လဲအရင်လိုပါပဲ ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အရမ်းရင်းနှီးသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လဲအခန်းပြန်ပြီးတော့ရေချိုးအ၀တ်လဲလိုက်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့နေ့ခင်းဘက်ကမပြီးမစီးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ
အဲ့ဒီနေ့က ဒင်နာကို၆နာရီလောက်သွားတယ် နည်းနည်းတော့မျက်နှာပူသလိုခံစားမိတယ် တီလေးကတော့ သာမန်ပါပဲ အဲ့ဒီနေ့ကထူခြားတယ်ဗျ ၅း၃၀ လောက်ကျတော့သွားမယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်လာတော့ကျွန်တော်အောက်ဆင်းသွားတော့တော်တော်လေးရင်ခုန်သွားတယ် တီတီ ၀တ်ထားတာ စကတ်ပျော့ပျော့လေးပါပန်းရောင်လေးဒူးအပေါ်နားလောက်ရှိတယ် အကျီကတော့အကျပ်တီရှပ်လေးပါအဖြူဆိုတော့အတွင်းကဘော်လီအနက်လေးပါမြင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုရင်းပြောရရင် dinner ကပြန်လာတာ၈း၃၀လောက်ရှိပြီဗျ ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော့်အခန်းကိုမပြန်ပဲသူအခန်းပဲလိုက်လာခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လဲမမကိုတီလေးအခန်းမှာပဲအိပ်တော့မယ်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ တီလေးအိမ်ခန်းကိုပဲလိုက်လာခဲ့တယ်။အခန်းရောက်တော့တီတီလေးကရေးချိုးပြီးတော့သူအခန်းကိုဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းရတာပေါ့အိမ်ကကောင်မလေးကလဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ ပြီးတော့မှအခန်းထဲကထွက်လာတယ်ဗျ ညအိပ်ဝတ်အပြာနုလေးနဲ့ပိုးသားထင်တယ်ပြောင်ပြောင်ချောချောလေးပဲ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုလာထိုင်ပြီးတော့သူလဲရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်နေတယ် ခဏနေတော့အိမ်ကကောင်မလေးကိုအိပ်ချင်ရင်အိပ်တော့ဆိုပြီးအိပ်ခိုင်းတယ်ဗျ ကောင်မလေးက kitchen ကအခန်းမှာအိပ်တာဆိုတော့တီလေးအိပ်ခန်းနဲ့နည်းနည်းဝေးတယ်လေ
ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမသိဘူး နေ့ခင်းကဖြစ်ခဲ့တာလဲပါမယ်ထင်တယ် လက်ကတော့ရဲလာတယ် တီလေးပေါင်လေးကိုပွတ်ပေးတော့ငြိမ်နေတယ် ဘာမှမပြောဘူးဧည့်ခန်းမှာလဲမီးအ၀ါပဲလေ မီးကအတိုးလျော့ရတော့မီးကိုနည်းနည်းလျော့လိုက်တော့မှောင်မှောင်လေးဖြစ်သွားတယ်
သူလဲကျွန်တော်ပေါင်ကိုလာကိုင်တယ်လေပြီးတော့ပွတ်ပေးတယ်ပွတ်ပေးနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကြားထဲကလီးအပေါ်ကိုပါပွတ်ပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်လဲအရမ်းတင်းနေတယ် ခဏနေတော့မှ ခုန်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့တီလေးခြေသလုံးလေးကိုပွတ်တော့သားသားအခန်းထဲသွားမလားတဲ့ဗျာ ကျွန်တော်လဲတီဗီပိတ်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်လိုက်တော့မှန်တင်ခုန်ရှေ့မှာဆံပင်ကိုစီးနေတယ် ကျွန်တော်လဲတီလေးအနောက်ကနေသိုင်းဖက်လိုက်တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားသလိုပါပဲဗျာ ဖင်လုံးလုံးလေးကိုပိုးသားလေးပေါ်ကဖိလိုက်တော့အရမ်းကောင်းတယ်ညအိပ်မီးလေးပဲထွန်းထားတဲ့အခန်းထဲမှာတီတီလိုချစ်စရာပြည့်ပြည့်တင်းတင်းလေးနဲ့ ဆိုတော့ဗျာ
ပြီးတော့အခန်းနံရံလေးကိုမှီပြီးတော့တီတီနှတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းတော့သူလဲစိတ်ပါနေတယ်ထင်တယ်ပြန်နမ်းတယ် နေ့ခင်းကဖြစ်ခဲ့တာထက်ကိုပိုပြီးနူးညုံနေသလိုခံစားမိတယ် နမ်းနေရင်းနဲ့တီတီဂါဝန်လေးကိုမပြီးချွတ်ပေးလိုက်တယ်သူပေါင်ကြားလေးထဲစမ်းကြည့်တော့အတွင်းခံလေးကစိုထိုင်းထိုင်းနဲ့ဗျ ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျီကိုချွတ်ပေးတယ် ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အပေါ်ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီးတော့အတွင်းခံပေါ်ကနေကျွန်တော်လီးကိုပွတ်ပေးနေတယ်ပြီးတော့သေချာကြည့်နေတယ်ဗျာ
ပြီးတော့ထပြီးတာဝါယူလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လဲဆေးမိထားသလိုပဲ ရင်တွေလဲအရမ်းခုန်နေမိတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်လီးကိုထုတ်ပြီးထိပ်လေးကိုဆွဲချပြီးတော့တာဝါနဲ့သုတ်ပေးတယ်ခံရတာတစ်မျိုးပဲဗျ ရှက်လဲရှက်နေသလိုပဲ အားလုံးပြီးသွားတော့ တီလေးလျှာလေးနဲ့လီးထိပ်လေးကိုလျှက်ပေးတယ် ကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရေးတောင်မပြတတ်တော့တာပါ ပြီးတော့မှသူနှတ်ခမ်းလေးနဲ့ လီးထိပ်လေးကိုသာသာလေးငုံထားပြီးတော့လျှာလေးနဲ့ကြားလေးထဲကိုကစားပေးတာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာသူပစပ်ထဲမှာတင်ပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာတာ ခဏစုပ်ပြီးတော့တီလေးကိုကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့တီလေးပေါင်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်သူဝတ်ထားတာနေ့ခင်းကတန်းပေါ်မှာလှမ်းထားတဲ့ဘောင်းဘီနက်လေးဗျ
ဗျောင်လေးပါပဲ ဘော်လီကလဲအနက်လေးပဲ ပြီးတော့သူကဘေးကိုလာလှဲလေဆိုတော့သူုဘေးကိုဝင်လှဲလိုက်တယ် သူကတော့ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လေးပါအရမ်းကြည့်ကောင်တယ်ဗျာ အသားကအရမ်းဖြူတော့တစ်မျိူးလေးပဲ ပြီးတော့ကိုယ်တီတီလေးဆိုတာသိရတော့ပိုစိတ်ကြွတယ် ကုတင်ပေါ်မှာဖက်ထားရင်းနဲ့တီလေးကြောကိုလက်ထဲ့ပြီးတော့ဘော်လီလေးကိုချွတ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနေ့ခင်းကထက်ပိုလှနေသလိုပဲဗျာပြီးတော့
“ရှုပ်ရှင်တွေတော့ကြည့်ဘူးတယ်” ကျွန်တော်ပြောတော့တီလေးက ရီနေတယ်ဗျ အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကိုလျောပြီးတီလေးနို့လေးတွေကိုလက်နဲ့ဆုပ်ဆုပ်ပြီးစို့ပေးနေတော့
ဖင်လေးကိုကုန်းကုန်းတက်လာတယ် တီတီဖင်လေးကပြည့်တော့အတွင်းခံအနက်လေးထဲမှာပြည့်ပြည့်တင်းတင်းလေးပေါ့ဗျာ ဖင်ကြားလေးနားမှာဘောင်းဘီကချိုင့်နေတော့အဲ့ဒီနေရာလေးတစ်လျောက်ဖင်ကြားထဲကိုလျှက်ပေးနေမိတယ်ဘောင်းဘီအနက်လေးကိုတီတီခါးကနေတစ်ဝက်လောက်ဆွဲချလိုက်တော့
ကျွန်တော်လဲစိတ်အရမ်းကြွပြီးတော့ ထည့်မယ်လုပ်တော့မှသတိရမိတယ် ဘာမှမပါဘူးလေ အဲ့ဒါနဲ့
“ရတယ် ထည့်လိုက်လေ တီတီမှာဆေးရှိတယ်”
တီတီလက်တွေကကျွန်တော်လည်ပင်းလေးကိုဆွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေကတီတီဖင်သားပြည့်ပြည့်လေးကိုပွတ်ပြီးတော့တစ်ချက်ခြင်းလိုးနေမိတယ် နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ပြီးအောင်လိုးရအောင်လေ တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကုတင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုလှဲချလိုက်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေ ထိုင်ရင်းနဲ့ဆောင့်ပေးနေတယ်ဗျာ
ပြီးတော့မှ သူကိုကုတင်လေးပေါ်ပြန်လှဲပြီးတော့ အပေါ်ကနေ ခါးလေးကိုကိုင်ပြီးဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးနေတုံးသူလဲအောက်ကနေကော့ကော့ပေးတာ ကောင်းလိုက်တာ
“သား တီတီပြီးတော့မယ် အားးးအားးးးး”
ကျွန်တော်သုတ်ရည်တွေကိုတီလေးစောက်ဖုတ်လေးထဲ ပန်းထည့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ပြီးသွားမှန်းသိတော့ကျွန်တော်ကိုတင်းတင်းလေးဖက်ထားပေးတယ်ဗျာ လီးကိုတီတီစောက်ဖုတ်လေးထဲမှာစိမ်ပြီးနှစ်ယောက်လုံးတင်းတင်းလေးဖက်ပြီးတော့ဘာနဲ့မှမတူတဲ့အရသာလေးကိုနှစ်ယောက်လုံးခံစားလိုက်ရပါအတူခံစားရင်းနဲ့ အဲ့ဒီညကအရသာလေးကိုနှစ်ယောက်လုံးစွဲလမ်းသွားမိပါတော့တယ်......ဖေဖေမေမေနဲ့ ညီမလေးလဲအတူလိုက်သွားခဲ့တယ် စစချင်းတော့သတိရလိုက်တာ မမဟိုဖက်အိမ်မှာသူငယ်ချင်းနဲ့သွားအိပ်တဲ့ညတွေဆိုတစ်ယောက်ထဲပိုသိသာတာပေါ့
အဲ့လိုနဲ့နေလာရင်းတစ်နေ့ …အဲ့ဒီနေ့ကမမလဲသူငယ်ချင်းနဲ့သွားအိပ်တဲ့ညပေါ့။ လေးလေးငယ်လဲခရီးထွက်နေတယ်တီလေးတို့အိမ်မှာ တီတီအဒေါ်တောင်ကြီကလာတဲ့နေ့ကပါ အဲ့နေ့ညက အလုံက ယူဂျီးနီးယားမှာညစာသွားစားကြတယ်ပြန်တော့ ၈ နာရီလောက်ရှိပြီးပေါ့
ပြီးတော့သူအဒေါ်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူကားနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ် အဲ့နေ့ကတီတီလေးဝတ်ထားတာ ထမိန်စကတ်အဖြူရောင်ပေါ်မှာအပွင့်လေးတွေနဲ့
လီးကတောင်နေပြီးလေ ဒါနဲ့နှစ်ယောက်မြို့မကျောင်းလမ်းဖက်ကိုကားမောင်းလာ၇င်းနဲ့ စမုံလမ်းထဲကိုကွေ့ဝင်လိုက်တော့လူတော်တော်ရှင်းတယ်မှောင်လဲမှောင်တယ်ဆိုတော့လမ်းဘေးမှာကားကိုရပ်ပြီးတော့ တီတီပေါင်လေးကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့ ရပါတယ် တီရယ်ဘာမှမမရှိတာပဲ ဆိုတော့ရီပြတယ်
ဖက်ထားရင်းနဲ့တီတီထမိန်စကတ်လေးပေါ်ကနေ ဆီးခုန်လေးကိုပွတ်ပေးတော့ အသက်ရှုသံတွေမြန်လာတယ်
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တီတီကသူအခန်းကိုမပြန်တော့ပဲကျွန်တော်အခန်းကိုလိုက်လာတယ် သူအိမ်ကိုတော့ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်တယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့နေလို့သားသားလဲပါတယ်
ပြီးတော့မှညီမလေးရဲ့ Dinner dress လေးကိုထုတ်ပေးပြီးလဲခိုင်းလိုက်တယ် ညီမလေးအကျီကအနက်ရောင်ပျောင်လေးပါ ညီမလေးက ၅ပေ ၄လောက်ရှိတော့တီတီနဲ့ နဲနဲတိုနေတာပေါ့
ပြီးတော့တိုတာကပေါင်တစ်ဝက်ကိုတောင်ကျော်တယ် ပြီးတော့မှ အိမ်ရှေ့မှာ အရက်အတူသောက်ကြတယ်ဗျာ ဖေဖေက ထမင်းမစားခင်သောက်တဲ့ ၀ီစကီရှိတယ်လေ
ကျွန်တော်ပြောတောတီလေးက ရီနေတယ်ဗျာ ပြီးတော့
“ ဘာလို့လဲ တီလေးကိုအထင်သေးလို့လား”
“သား တီလေးနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေချင်တာပါ ပြီးတော့အခုလိုလေးနေရတာကိုလဲကြိုက်တယ်”
party Dress အနက်ကျပ်ကျပ်လေးနဲ့လက်မောင်းသားဖြုဖြုပြည့်ပြည့်လေးပေါ်ကအသားလေးထဲမြုတ်နေတဲ့ ဘော်လီ
အနက်ကြိုးလေးရယ် ကျောလယ်လောက်ရှည်တဲ့ဆံပင်ဖျောင့်ဖျောင့်လေးကိုနောက်ကနေစုစီးထားပြီးတော့ဖွေးနေတဲ့ဂုတ်သားဖြူဖြူလေးပေါ်က platinum
ကြိုးပြောင်ပြောင်လေးရယ်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နုနယ်တဲ့မျက်နှာလေးပေါ်ကရမက်အငွေ့အသက်လေးတွေနဲ့ ဖောင်းအိနေတဲ့ ပန်းသွေးရောင်ပါးမို့မို့လေးတွေ
အကျီဟိုက်ဟိုက်ကြားမှာမို့တက်နေတဲ့ရင်သားဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ dress ကျပ်ကျပ်တိုတိုလေးထဲကနေဖောင်းအိရုန်းကြွနေတဲ့ ဆီးခုန်မို့မို့လေး......
ပြီးတော့ပြည့်တင်းနေတဲ ပေါင်တံလေးကိုတုတ်နှောင်ဆွဲကပ်ထားတဲ့ပိတ်သားပျော့ပျော့လေးပေါ်မှာ မို့မောက်ပြည့်တင်းနေတဲ့
တင်လေးနှစ်လုံးကိုမတင်ထားတဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီရာလေးနဲ့ တီတီလေးရဲ့အလှဟာ စာဖွဲ လို့မရလောက်တဲ့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခါးလေးကိုဆွဲကပ်လိုက်တော့အလိုက်သင့်လေးပါလာတဲ့ ကိုယ်လုံးပြည့်ပြည့်လေးနဲ့အတူ
dress ပေါ်ကအတွင်းခံဘောင်းဘီရာလေးတစ်လျောက်လက်နဲ့ပွတ်ဆင်းသွားပြီးတော့ တီတီလေးတင်နှစ်လုံးကြားက
ပြီးတော့မှ မွေးညှင်းလေးတွေနဲ့ဖွေးနေတဲ့ တီတီလည်ပင်းကအကြောလေးကို
အဲ့ဒါနဲ့တီတီကိုဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ကျွန်တော်လဲဆိုဖာအောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့
“သားသား တီလေးကိုလိုးချင်နေပြီလား” အတွင်းခံလေးကိုဆွဲချွတ်ရင်းနဲ့လီးတံလေးကို
ခဏစုပ်ပြီးတော့မှ ပက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့တီတီလေးကို ပွေ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲ
ခေါ်လာခဲ့တယ် ကျွန်တော်ကုတင်ဘေးမှာပဲ တီတီလေးကိုဖက်ထားရင်းနဲ့
“အင်း..... ပြောလေ သားသား”
“တီတီ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ခံနော် အသံလဲထွက်လို့ရတယ် ဘယ်သူမှမှအရှိတာ”
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ ရှင့်” ဆိုတဲ့စကားသံလေးကိုအပြုံးလေးနဲ့ပြောလာတယ်
“ဖြည်းဖြည်းနော် သားသား”ဲ့
စောက်ဖုတ်လေးထဲမှာလီးကိုစိမ်ပြီးတော့ အသာအယာလှုပ်ပေးတော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထဲတဲ့တီတီမျက်နှာလေးမော့လာတယ် တစ်ချက်ချင်းပြင်းပြင်းလေးဆောင့်လို့းပေးတော့
နူးညံ့တဲ့အသံလေးတစ်သံကိုတီတီလေးရဲ့နှုတ်ကကြားလိုက်ရတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော့ရင်ခွင်ထဲမှာခေါင်းလေးဝှက်ရင်းနဲ့ ချိုမြိန်တဲ့ ညချမ်းလေးကိုအတူခံစားနေခဲ့မိတယ်.......................................................
အဲ့ဒီနေ့ကမှတ်မှတ်ရရ သောကြာနေ့ည… 11:28 pm ..…….
စိတ်တော့တိုသွားမိတာပေါ့…… ဒါပေမဲ့ ဖုန်းပေါ်က TT ဆိုတဲ့နာမည်လေးကကျွန်တော့်ရဲ့ တိုသွားမိတဲ့ စိတ်ကိုချက်ခြင်းပဲတည်ငြိမ်သွားစေတယ်။ ဖုန်းကိုကိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သာယာနာပျော်ဖွယ်အသံလေးတစ်ခု……..
“တီလေးကိုကောင်းလေးတစ်ယောက်လိုက် Q နေတယ်ကွာ”
“အော် ဘယ်ကလဲ တီလေးနဲ့ရောဘယ်လိုသိသွားတာလဲ”
“သူနဲ့လမ်းမတော် city mark မှာခွေဝယ်ရင်းနဲ့သိတာ”
“ကောင်လေးက ၁၈ ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ ဆေးကျောင်းဒုတိယနှစ်တဲ့ ပြီးတော့ညတိုင်းဖုန်းဆက်လာတယ်” “ပြီးတော့မမကချစ်စရာကောင်းတယ်
ပြောတယ် ပြီးတော့ Sex အကြောင်းတွေလဲမေးတယ်”
“အဲ့ဒါ မမအိမ်ကိုလာလည်ချင်တယ်ဆိုလို့လေ….အိမ်ကိုလဲမပြချင်ဘူး သားသားအခန်းကိုပဲပြောလိုက်မလားလို့ ……သားသားရော ဘယ်လိုလဲ ရရဲ့လား”
နောက်နေ့ကျတော့အိမ်သော့အပိုတစ်ချောင်းကိုတီတီလေးကိုပေးထားရင်းနဲ့ ကျွန်တော်လဲအခန်းထဲကမထွက်ပဲတစ်နေ့လုံးစောင့်နေမိတယ်။နေ့လည် ၁နာရီလောက်မှာကျွန်တော့်အိမ်တံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ တီလေးအသံကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။
အရမ်းရင်ခုန်တယ်ဗျာ။ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အချိန်တောင်အဲ့လောက်ရင်မခုန်မိဘူး အခန်းထဲကချောင်းကြည့်လိုက်တော့မဆိုးပါဘူး ဖြူဖြူသန့်သန့်လေးပါပဲ ပြီးတော့တော်တော်ရင်းနှီးနေတဲ့ပုံပဲ ကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲကမီးပိတ်ပြီးလော့ခ် ချထားရတာပေါ့ဗျာ
“ မမ အမျိုးသားရော”
ဒါဆိုကျွန်တော်လဲအိမ်သာခဏသွားချင်တယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားတဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ် ၁၅ မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်
နောက်ဖက်ဆိုတော့အသံမကြားရဘူးဗျ ခဏကြာတော့မှနှစ်ယောက်အတူပြန်ထွက်လာတယ် ပြီးတော့မှ “မမကချစ်စရာကောင်းတယ်နော်”
“အိမ်ရှေ့ကြီးကွာ” ဆိုတဲ့တီလေးအသံကိုကြားရတယ် ပြီးတော့အခန်းထဲကိုလျှောက်လာကြတယ်လေ
အခန်းဆိုတာကျွန်တော်ဘေးကညီမလေးအခန်းပါ အခန်းထဲရောက်တော့ဒါဘယ်သူအခန်းလဲမမဆိုတော့ တူမလေးအခန်းတဲ့…………………………………………………………………..
တီလေးလဲတကယ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ် ဖြူဖြူသန့်သန့်လေးပါပဲ ဒါပေမဲ့ sex ကိုတော့အရမ်းကြိုက်တယ်
ပေါင်လယ်တောင်ကျော်တယ် အပေါ်ကတော့တီရှပ် ကျပ်ကျပ်လေးနဲ့ဗျာ
ကျပ်နေတဲ့ တီရှပ်လေးထဲကနေ လုံးတင်းထွက်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ နို့အုံလေးက မို့မောက်ဝင်းပလို့
ဘော်လီအနီရောင်လေးကတီရှပ်ပါးလေးပေါ်မှာ ပုံသေတကျ တိတိရိရိ…………
စကတ်လေးထဲကနေရုန်းကန်တွန်းထွက်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ဖင်သားအိအ်ိလုံးလုံးလေးတွေနဲ့ ဖင်သားအိအိတွေကိုထွေးပွေ့မတင်ထားတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီသားရေကြိုးရာလေးကဖင်သားအရစ်နားလေးတစ်လျောက်ဖောင်းဖောင်းလေးထင်းလို့ပေါ.
နမ်းနေရင်းစကတ်သားပျော့ပျော့လေးပေါ်ကနေဖင်လုံးလေးကိုညစ်ပေးတော့ ခါးတွေကိုကော့ပေးနေတဲ့ တီလေးရဲ့အလှက အချစ်နတ်သမီးလေးတစ်ပါးကိုယ်ဟန်ပြနေသလို လှပကြွရွလို့………
စကပ်လေးကိုမပြီးတော့ဖင်ကြားလေးထဲကိုတီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ သူ့ရဲ့လက်ခလယ်လေးနဲ့ ပွတ်သပ်ဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ……..
တီလေးကိုအကျီတွေချွတ်တယ် သူပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်ပြီးတော့တီလေး ဘော်လီအနီလေးပေါ်ကနေမို့မောက်လျှံတက်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ နို့အုံဖောင်းဖောင်းလေးပေါ်ကိုလျှာနဲ့ယက်လို့ပေါ့
တီလေးရဲ့ ပုခုံးသားဖြူဖြူလေးထဲကိုနစ်မြုတ်အိဝင်နေတဲ့ ဘော်လီကြိုးနီနီလေးကို လက်မောင်းဘေးကိုဆွဲချရင်းတီလေးပုခုံးသားတွေကိုပါးစပ်နဲ့ စုပ်ယူပွတ်သပ်နေတယ်။
ပွတ်သပ်နေရင်းပဲတီလေးနောက်ကျောက ဘော်လီချိတ်လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ ဖွေးနေတဲ့တီလေးရဲ့နို့အုံ အိအိလေးပြီးတော့ နို့အုံရဲ့အလယ်ကလှလှပပလေး ပြည့်တင်းဆူတက်နေတဲ့ ပန်းနုရောင်နို့သီးခေါင်းလေးက အထိန်းအကွတ်မဲ့ စွာနဲ့ အရိုင်းဆန်ဆန်လေးပြိုအိကျလာတယ်လေ။
မီးရောင်ဝါ၀ါလေးရဲ့ ရွှေဝါရောင်အလင်းခပ်မှိန်မှိန် ကအခန်းထဲမှာပက်ဖြန်းလို့………… လေအေးပေးစက်ရဲ့အေးမြလက်ဆတ်တဲ့ လေနုအေးလေးတွေနဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ သူစိမ်းယောင်္ကျားပျိုတစ်ယောက်ရဲ့အထိအတွေ့အယုအယတွေ…. ဆူတင်းပြည့်ဖြိုးပြီးအရွယ်တင်နုပျိုနေတဲ့ ဦးလေးရဲ့ဇနီး ကျွန်တော့်ရဲ့ တီတီလေး……. တီလေးရဲ့ အဖြူရောင်တီရှပ်လေးက ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်မှာကပိုကရို ၊ဘေးမှာတော့ အနီရောင် ဘော်လီလေးက သူထွေးပွေ့ထားရတဲ့ နို့အုံဖြူဖြူလှလှလေးနဲ့ ကဗျာဆန်တဲ့အလှပိုင်ရှင်တီလေးကိုငေးမောနေသယောင်ယောင်……
တီလေးရဲ့ ချစ်စရာမျက်နှာလေးပေါ်မှာတော့ ရမက်ပြင်းပြင်းတွေရဲ့ခြယ်မှုန်းမှုကြောင့် ပန်းနုရောင်လေးနဲ့ နုပျိုလို့
ရင်ဖိုလှိုက်မောနေတဲ့ ရင်သားအစုံကနိမ့်တုံမြင့်တုံ …… လည်ပင်းကိုမော့ရင်းမှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ နီထွေးတဲ့ ခပ်ဟဟနှုတ်ခမ်းတစ်စုံက တီလေးရဲ့ခံစားချက်တွေကို လှစ်ဟ၀န်ခံနေတယ်လေ။
အို………………………………အားလုံးဟာ ဂန္တ၀င်ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာရသအပြည့်နဲ့ နှလုံးသားကိုဖွင့်လို့ရေးဆွဲထားတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပါပဲ။ အဲ့ဒီပန်းချီကားလေးကိုခံစားချက်တွေရင်ခုန်မှုတွေနဲ့ ငေးမောနေမိတဲ့ကျွန်တော့်ရင်တဲ့မှာတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေနဲ့ တလှုပ်လှုပ်ခံစားရင်းအရည်တွေစို့နေတဲ့ ကျွန်တော့ ရဲ့လီးကိုခပ်တင်းတင်းပဲဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေမိတယ်။
ပြီးတော့သူလေ….တီလေးကိုကုတင်ပေါ်လှဲချရင်းတီလေးလက်ကိုယူပြီးတော့သူလီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ဂွင်းထုခိုင်းတယ် ခဏကြာတော့ ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လေးလှဲချလိုက်တဲ့သူပေါင်ကြားမှာ
လေးဘက်ထောက်ထားတော့ တီလေးရဲ့ နို့ အိအိလေးတွေကတွဲကျလို့ရမ်းခါနေတယ်။
ဘောင်းဘီပေါ်ကနေယက်နေတယ်ထင်တယ် စကတ်နဲ့အုပ်ထားတော့သေချာမမြင်ရဘူးဗျ တီလေးတစ်ယောက်နံရံတွေကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖင်ကိုလှုပ်ပေးနေတာပဲမြင်တယ်
ပြီးတော့သူဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့တီလေးစကတ်ကိုချွတ်လိုက်တော့ မမ ဘောင်းဘီမချွတ်နဲ့ဒီတိုင်းလေးထားနော်တဲ့
တီလေးရဲ့ခါးပေါ်ကိုလိပ်တက်နေတဲ့ စကတ်ရဲရဲလေးကိုချွတ်ပေးတော့ဖင်လေးမြှောက်ပေးတဲ့ အချိန်မှာဆီးခုန်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့အပြိုင် စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးတွေကအတွင်းခံဘောင်းဘီလေးထဲကနေရုန်းကြွလို့နေတယ်။
စကတ်နီနီလေးပြီးတော့တီလေးရဲ့အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကိုခါးသားရေကြိုးလေးကနေကိုင်လို့ချွတ်ပေးလိုက်တော့ ပြောင်တင်းနေတဲ့ ဆီးခုန်လေးအောက်မှာအမွေးလေးရိတ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းမို့မို့လေးကထင်းထင်းလေးပေါ်လို့လာတယ်။
သူပိုက်ဆံအိပ်ထဲကကွန်ဒုံးကိုထုပ်ပြီးတောစွပ်တယ်ဗျ တီလေးပေါင်ကြားမှာထိုင်ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်လေးကိုသူလီးနဲ့တေ့ပြီးတော့
တစ်ချက်ထဲပဲဗျာဆောင့်လိုက်တာ တီလေးလဲနာသွားတယ်ထင်တယ် မျက်နှာလေးမဲ့သွားတယ် ပြီးတော့တီလေးကိုဖက်ါပြီးတော့အပေါ်ကနေဆက်တိုက်ဆောင့်
နေတော့တာပဲဗျာ ခဏလေးပဲဗျ အချက် ၂၀ လောက်ဆောင့်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ထင်တယ် သူလဲဘေးကိုလှဲချပြီးတော့မှိန်းနေတယ်
တီလေးကတော့မပြီးသေးဘူးထင်တယ် ခဏနေတော့မှ ရေသွားဆေးအုံးမယ်ာ့ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဗျ တီလေးလဲသဘက်လေးနဲ့ပတ်ပြီးအပြင်ထွက်သွားတယ်
ပြီးတော့အခန်းထဲပြန်လာပြီးတော့အ၀တ်တွေပြန်ဝတ်နေတယ် ပြီးတော့ ညီမလေးဘီဒိုကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှာနေတယ်ဗျ ကျွန်တော်လဲဒီဖက်ကနေပြောလို့ကလဲမရဘူးလေ
တီလေးကလဲမလာသေးဘူး ခဏနေတော့ဘီဒိုထဲကညီမလေးအတွင်းခံ အနီရောင်လေးကိုယူပြီးတော့သူအတွင်းခံထဲမှာဝှက်သွားတယ်ဗျာ
သူပြန်သွားတော့မှကျွန်တော်လဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ ခံစားရတာတော့တစ်မျိုးလေးပဲတဲ့ အသစ်အဆန်းလေးတဲ့
ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲတော်တော်ကောင်းနေပြီလေ အဲ့ဒါနဲ့ တီလေးကိုကုတင်ပေါ်မှာအိပ်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လိုးတော့တာပါပဲ တီလေးစောက်ဖုတ်လေးကခံစားချက်တွေကြောင့်စိမ့်ထွက်စီးဆင်းလာတဲ့အချစ်ရည်ပျစ်ချွဲချွဲလေးတွေကြောင့်
လီးခေါင်းလေးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပွင့်လာတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့တီလေးမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးလေးတစ်ပွင့်……..
လှပပွင့်အာနေတဲ့ နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးတွေလို ကျွန်တော့်လီးကိုစုပ်ငုံထွေးအိထားတဲ့ တီလေးရဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေး…. ရှေ့ကိုတိုးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကိုထွေးပွေ့လို့ ဆွဲငင်စုပ်ယူလိုက်ပါလာတဲ့ တီလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတစ်စုံ ….အားလုံးဟာကဗျာဆန်နေလိုက်တာ။
တီလေးကိုယုယုယယပွေ့ဖက်ရင်းစောက်ဖုတ်လေးကိုဆောင့်လိုးနေမိတော့ ခပ်ရေးရေးလေးဟနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံဆီက တိုးတိတ်ညင်သာတဲ့ တီလေးရဲ့ အော်ငြီးသံလေးတွေက ကာရံမိမိရွတ်ဆိုနေတဲ့ အချစ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ဂီတသံစဉ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုကြားလိုက်ရသလိုပါပဲ
ရမက်ပြင်းပြင်းတွေထန်နေတဲ့ တီတီလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အထွဋ်အထိပ် ခံစားမှုလေးဟာလဲတစ်ဖြေးဖြေးနီးကပ်လို့လာတယ်လေ။
ခံစားချက်တွေနောက်ကိုအလှိမ့်လှိမ့်ကူခပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုတင်းတင်းလေးပွေ့ဖက်လို့ မို့မောက်ဖောင်းအိနေတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေကိုအဆက်မပြတ်ကော့ရင်း ဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်ညီးသံအဆုံးမှာတော့…..
တီလေးရဲ့ စကားသံတွေနဲ့အတူ တင်းတင်းလေးစုပ်ယူဖျစ်ညှစ်လာတဲ့ တီလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်အထ်ိအတွေတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော့်လီးတစ်လျှောက်လုံးကျင်တက်လာတယ်လေ။
ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းတွေရဲ့အဆုံးမှာ လှပကြော့ရှင်းတဲ့ တီးလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းကျွန်တော့်လီးရေနွေးနွေးလေးတွေကို တီလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းပိုင်းထဲ့ညှစ်ထုတ်လိုက်မိတယ်။